Onyinye mmiri ịsa ahụ mejupụtara
Comprehensive anya na-asa ọdụ
Akwa ngwaọrụ anya
Mobile obere anya washer
Pedal compound akpaka efu efu compound nkuanya, ìhè na mfe, nwere ike na-akpaghị aka efu nke esịtidem ihe mmapụta mmiri nke eyewash, echekwa na ihe bara uru.
Nzukọ anya na-anabata akụkụ atọ nke 304 igwe anaghị agba nchara + ABS odo epoxy resin, na enweghị nkebi nchara tube ebu nkedo jikọtara ịkpụzi, ezigbo elu, ike mgbali eguzogide, ogologo ọrụ ndụ, anya na ahịa isi ngalaba bụ iri mpempe ịgbado ọkụ nzukọ, Weld, elu adịghị mma, na-arụ ọrụ n'okpuru nrụgide abụghị nrụgide, ọ dị mfe ịgbawa mgbapụta ọkpọkọ, ndụ ọrụ dị mkpirikpi.
Basic: BH30-5012 nnukwu pedal compound eye washer
Ebe ịsa ahụ:
dayameta 260mm, ọkpụrụkpụ 0.6mm, 360 Celsius adiana ịsa ahụ, ọ dịghị nwụrụ anwụ n'akuku, dum ahu mkpuchi ebe bụ nnukwu, izute na gafere United States ọkọlọtọ (chọrọ na 1524mm si n'ala dị elu, na sprinkler dayameta iru dayameta nke 508mm) , Mmiri mmiri nke ịsa ahụ ruo 180L / min, zuru oke mezuo ihe ndị ọkọlọtọ ndị America chọrọ maka anya ịsa akwa.
Ma elu ma nke ala nakweere valvụ mpempe mpempe abụọ, nke dị elu karịa valvụ bọọlụ otu, oghere ọhụụ buru ibu, nwere ike izute ọkọlọtọ America nke nchacha akwa anya. (Ntugharị na-agba ≥ 75.7L / min, nchacha anya ≥ 11.4L / min, dị irè na ngwa ngwa)
Ngwaọrụ na-agbanwe agbanwe, nwere ike ịhazigharị mmiri ọ bụla n'oge ọ bụla, zere nrụgide mmiri nke nrụgide na-ekwekọghị ekwekọ na nrugharị enweghị ike imezu ihe achọrọ nke ịsa na nsogbu ndị ọzọ. Biko gosi na nsogbu mmiri dị na saịtị ruru 0.25MPa.
Modelkpụrụ isi: BH30-5012
BH30-5012T: Onye na-asacha ọnụ
BH30-5012A: Obere pedal
BH32-5012: Nnukwu eyeal vetikal na-enweghị anya (na-enweghị isi mmiri)
BH32-5012A: Obere pedal vetikal anya akwa (na-enweghị isi mmiri)
Nke gara aga: Antifrizi anya washer (lie)
Osote: Vertical anya washer